Aqoonta iibsiga qalabka: afar tabaha lagu xusho boorsada dibedda - Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd.
Guri > Warka Warshadaha > Aqoonta gadashada qalabka: afar tabaha lagu doorto boorsada dhabarka ee banaanka
Saaxiibbo badan oo safarka ah ayaa sheegay in markii ugu horreysay ay safka ku biireen maxaa yeelay waxay arkeen qof sita shandad weyn. Ka dib markaan si tartiib ah u jeclaaday banaanka, waxaan ogaaday in boorso ay ka mid tahay qalabka ugu muhiimsan ee loogu talagalay isboortiga banaanka. Boorsada dibedda ah ee kugu habboon adiga kaliya ma hagaajin kartid ku habboonaanta isboortiga banaanka, laakiin sidoo kale waxay yareyn kartaa dadaalka safarka.
Trick 1: Dooro shandad sida ku xusan safarka
Dib-u-bixid safar maalin-socod ah, baaskiil wadid, waxqabadyo buuro ah, dooro boorso ka yar 30 litir. Kaamamka markaad deggan tahay laba ilaa saddex maalmood, waxaad dooran kartaa boorso boorsooyin badan oo badan oo shaqeynaya 30-40 litir, sida boorsada dibadda ee KingCamp KB3291, oo miisaankeedu fudud yahay oo dhinacyo badan leh. Waxay leedahay nidaam hagaajin laabta ah, nidaam habeyn hawo oo ganaax ah, nidaam hagaajin suunka garabka oo deg deg ah, iyo keydinta dhexda. Waa ku habboon tahay, wax ku ool ah, ammaan ah oo raaxo leh.
Socodka socodka in ka badan afar maalmood, qalabka bannaanka sida teendhooyinka, bacaha jiifka, iyo dermaha uumiga ka cawda waa in la dhigaa. Waxaad dooran kartaa boorsada dhabarka oo ah 45 litir ama ka badan. Intaas waxaa sii dheer, boorsooyinka dhabarka loo isticmaalo ee loogu talagalay howlaha guud ee duurka ayaa ka duwan kuwii loo isticmaali jiray markii la fuulo buuraha dhaadheer. Boorsooyinka dhabarka loo adeegsado ee buurbuurku ma leh qaybo badan. Kuwa jecel buurta fuula waa inay fiiro gaar ah u yeeshaan.
Trick 2: Dooro shandad ku xiran tirada dadka
Kali socod ahaan, waxaad dooran kartaa boorso 25 ilaa 35 litir. Markaad qoyska iyo carruurta u bixinayso fasax, marka laga eego daryeelka qoyska, waxaad u baahan tahay inaad doorato boorso ku dhow 40 litir, waxaana jira nidaamyo badan oo dibedda ah oo ka caawiya xubnaha qoyska inay qaadaan dalladaha, kaamirooyinka, cuntada iyo waxyaabaha kale.
Trick 3: Dooro boorso sida ku xusan dhererka jirkaaga
Kahor intaadan dooran boorso, waxaad marka hore ubaahantahay inaad cabirto dhererka dhabarkaaga kore ee jirka, taasi waa, masaafada udhaxeysa laf-dhabarka ilmo-galeenka illaa iyo laf-dhabarka ugu dambeeya. Haddii dhererka jirku ka yar yahay 45 cm, waa inaad iibsataa boorso yar. Haddii dhererka jirku u dhexeeyo 45-52 cm, waa inaad doorataa bac dhexdhexaad ah. Haddii jirkaagu ka dheer yahay 52 cm, waa inaad soo qaadataa boorso weyn.
Heerka tixraaca ayaa ah in miskaha iyo lugaha ay ka muuqdaan dhabarka gadaal marka ay qaadanayaan boorsada. Haddii aad aragto oo keliya boorso weyn iyo laba lugood oo hoose, waa khalad oo waa khatar.
Trick 4: Dooro boorsada iyadoo loo eegayo jinsiga
Noocyada kala duwan ee jirka iyo awoodda rarka ee ragga iyo dumarka dartiis, doorashada boorsooyinka banaanka ayaa sidoo kale ka duwan. Safar gaaban oo ah hal ama laba maalmood, boorsada ragga iyo dumarka ee ilaa 30 litir ayaa ku filan. Safarka masaafada dheer ama kaamam qaadashada wax ka badan 2 ilaa 3 maalmood, markii aad dooranayso boorso dhan 45 illaa 70 litir ama ka weyn, ragga guud ahaan waxay doortaan boorso qiyaastii ah 55 litir, haweenkuna waxay doortaan boorso dhan 45 litir.
Intaa waxaa dheer, qaabka iyo raaxada boorsada waa in si shaqsi ah loo tijaabiyaa ka hor inta aan la dooran. Ka fogow taabashada jir ama jeebka kore markaad kor u fiiriso. Dhammaan qaybaha boorsada ee taabta jirka waa inay lahaadaan barkinta kuleylka, xayndaabka gudaha iyo dusha boorsada dhabarka. Mawduucu waa inuu ahaadaa mid adag. Fiiro gaar ah u yeelo dhumucda iyo tayada garabka garbaha, oo hubi inay jiraan xargaha xabadka, suumanka dhexda, garabka garbaha, iwm.
Hore:Waxaa jira xirfad lagu ilaaliyo boorsooyinkaaga magaca weyn leh